के चीनमा कोरोना भाइरस साँच्चिकै नियन्त्रणमा आएको हो ? कि सेन्सरसिप गर्दैछ चीन ?
फरकधार / २८ फागुन, २०७६
एजेन्सी– चीनको एक प्रमुख पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा आज मुख्य समाचार छापिएको छ– चीन अँध्यारो क्षणबाट बाहिर आयो ।
यो समाचारमा चिनियाँ राष्ट्र सी जिनपिङको वुहानमा भएको यात्रालाई निकै प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । अनि दाबी गरिएको छ– चीनमा अब कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या निकै घटेको छ ।
सिन्ह्वाले त लगातार त्यहाँको सरकारको प्रशंसा गर्दै समाचार छापिरहेको छ, ट्विट गरिरहेको छ । अनि चीनले पनि नयाँ संक्रमित नआएको दाबी गरेको छ । यो दाबी मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित वुहान प्रान्तमा पुगेपछि अझ धेरै आइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको यो भ्रमण पनि यही सन्देश दिन गरिएको सबैले बताइरहेका छन् ।
यसअघि चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ८०७५४ पुगेको र ३१३६ जनाको मृत्यु समेत भएको बताइएको थियो ।
चीनले यसरी दाबी गर्नु एउटा पक्ष भए पनि केही आलोचकहरुले चिनियाँ सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ सरकारले सेन्सरसिप लगाएको र वास्तविक समाचार बाहिर नल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
किनकि चीनले पछिल्लो समय इन्टरनेटमा केही सामग्रीहरु ब्लकसमेत गरेको छ । चीनमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक उपकरण नभएको एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको थियो । भिडियोमा एक चिकित्सकले चिनियाँ सरकारको आलोचना गरेका थिए । तर, अब यो भिडियो इन्टरनेटमा उपलब्ध छैन । यसको अर्थ हो, चीनले यो भिडियो इन्टरनेटबाट नै निकालिदिएको छ ।
त्यसैले, आलोचकहरुले चीनको सकारात्मक पहललाई स्वीकार गर्दै उसले पछिल्लो समय सेन्सरसिप लगाउन थालेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
त्यसो त सन् २००२ मा सार्स भाइरसको संक्रमण व्यापक भएपछि पनि यस्तै स्टेप लिइएको थियो । अनि त्यसलाई पनि सेन्सरसिप गर्न खोजिएको थियो ।
त्यति बेला चीनले वास्तविक जानकारीहरु लुकाउन प्रयास गरेको बताइएको छ ।
त्यसैले अहिले पनि विश्वका विज्ञहरुले चीनले कोरोना भाइरसबारे सेन्सरसिप लगाउन सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रकाशित मिति : फागुन २८, २०७६ बुधबार १३:५०:५६,